Huawei MatePad Pro: muuqaalkani wuxuu xaqiijinayaa nashqadihiisa iyo muuqaalkiisa | Androidsis
Noofambar 25 ee soo socota waxaan ballan la leenahay Huawei. Soo saaraha Aasiya wuxuu rabaa inuu naga yaabiyo iyada MatePad ProKiniin cusub oo heer sare ah kaas oo ujeedadiisu tahay inuu u istaago miisaanka culus sida Samsung Galaxy Tab S6 ama iPad Pro. Ilaa hadda, waxaan aragnay faahfaahinta ugu horeysa ee naqshadeeda suurtogalka ah.
Laakiin, waxay u muuqataa inaanan sii sugi doonin si aan u ogaano waxa beddelka iPad Pro cusub ee Shenzhen ee ku saleysan Shenzhen uu u ekaan doono. Wax kasta ka badan, sababtoo ah a Fiidiyowga xayeysiinta ee Huawei MatePad Pro halkaas oo ay wax yar kaga tagto male awaalka.
Tani waxay noqon doontaa Huawei MatePad Pro: stylus iyo awoodda dhererka si ay ugu hor istaagto iPad Pro
Heerka naqshadeynta, waxaan xaqiijin karnaa in wax-qabadyada la soo bandhigay ay yihiin kuwo dhab ah. Sidan oo kale, Huawei MatePad Pro wuxuu ku sharxayaa aluminium dhammays tiran oo la dhimay si uu u bixiyo badeecad ka soo baxda tayada mid kasta oo daloolkeeda ah. Laakiin, shaki la'aan, mid ka mid ah awoodiisa waa inuu la xiriiraa wax soo saarka.
In ka badan wax kasta sababtoo ah Huawei MatePad Pro stylus waxay noqon doontaa mid ka mid ah jibbaarada ugu muhiimsan ee aaladda tilmaamaysa siyaabaha loo noqon karo beddel cad oo iPad Pro ah.
Tan, ku dar qaar sifooyin farsamo ah oo ammaanaya Huawei MatePad Pro ee ugu sarreeya qaybta. Sida laga soo xigtay imtixaanadii ugu dambeeyay ee waxqabadka ee la soo bandhigay, IPad Pro-tan ayaa ka muuqan doona processor-ka Kirin 990, jewelka taajkii shirkadda Shiinaha, oo ay weheliso qaabab kala duwan oo ah 6 ama 8 GB ee RAM iyo xulashooyinka kaydinta gudaha oo u dhexeeya 128 ilaa 512. XNUMX GB. Oo haa, waxay yeelan doontaa booska kaadhka microSD kaas oo lagu sii ballaarinayo awoodda qalabka.
Ku sii wadida Tilmaamaha Huawei MatePad Pro, si loo sheego inay la imaan doonto EMUI 10, is-dhexgalka gaarka ah ee soo-saaraha oo ku saleysan Android 10, nooca ugu dambeeyay ee nidaamka Google ee aaladaha mobilada. Ka digtoonow, batarigiisa 7.000 mAh wuxuu tilmaamayaa siyaabo lagu bixiyo madax-bannaani adag oo la garaaco. Qiimaheeda? Qarsoodi ah, in kasta oo waxa ugu macquulsan ay noqon lahayd in aanay ka badnayn 800 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Fiidiyowgaan wuxuu xaqiijinayaa naqshadeynta iyo qeyb ka mid ah astaamaha Huawei MatePad Pro